Daisy: Apple robot nke na-ebibi 200 iPhones kwa awa | Akụkọ akụrụngwa
Afọ ole na ole gara aga Apple webatara robot aha ya bụ Liam, onye oru ya bu ichikota iphone rụọ ọrụ nke ọma. Zọ a, akụkụ ndị nke ka dị mma nwere ike enwetaghachi ma jiri ọzọ. Ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ ekpughere robot ọhụrụ, n'oge na-adịghị anya maka ụbọchị ụwa. Ọ bụ maka Daisy, a robot onye ọrụ ya bụ ibibi iPhones.
Robot a na - ewepu iPhone ekwentị ma weghachite ya nke ọma karịa Liam. Dabere na ihe ha na-ekwu, ọ nwere ike iwepu ma kewaa ụfọdụ ihe dị ka ekwentị 200 kwa elekere. Ọzọkwa, a na-ejigharị akụkụ ndị kasị baa uru na ekwentị.
N'ụzọ dị otú a, ekele Daisy, Apple chọrọ imegharị n'ụzọ ka mma na mmepụta ya. N'ihi ya, ha na-ezere ibibi ihe ndị dị oké ọnụ ahịa nke a pụrụ iji mee ihe ọzọ na ngwaahịa ndị ọzọ. Isi ọrụ nke robot ga-abụ ịmata ọdịiche dị n'etiti ihe ndị a dị mma na ihe ọjọọ.
Ọ bụ ezie na ọ na-eme ya n'ụzọ zuru oke ma na-arụ ọrụ nke ọma karịa nke mbụ robot. Ya mere, ọ bụghị naanị na Daisy dị ngwa ngwa, mana enwerekwa njehie dị ala. Ya mere, ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị dị mma a na-ejighị mee ihe adịghị mma na nke a.
Apple ewebatala robot a maka ụbọchị ụwa. Companylọ ọrụ ahụ na-achọ ịkụziri ndị na-azụ ahịa ihe dị mkpa maka imegharị ma chebe ụwa. Maka nke a, ha haziri ihe omume dabara na ngosipụta Daisy.
Ruo Eprel 30, maka ngwaọrụ ọ bụla ndị ahịa laghachiri ka agbanwere ha maka nke ọzọ ma ọ bụ megharịa ya, ha ga-enye onyinye. Kpọmkwem, a ga-enye ya aka na Conservation International. Ọ bụ NGO na Arlington, Virginia (United States) nke raara onwe ya nye ichedo okike, ihu igwe kwụ ọtọ, mmiri dị ọcha na isi mmalite nri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Daisy: Robot ọhụrụ Apple nke na-ebibi iPhones